Qisada dagaalkii Quusiye ee Taariikhda Galay ONLF vs Ethiopia” Qaybta 2-aad. | ogaden24
Qisada dagaalkii Quusiye ee Taariikhda Galay ONLF vs Ethiopia” Qaybta 2-aad.
Nov 4, 2018 - Aragtiyood
Hadaba intuuna waagu baryin aan idhaahdo markuu dagaalkii soodhamaaday ee N/hure Qorax shihiiday 6 Halgamaa oo dhaawac ahna goobta laysugu keenay waxaa la bilaabay in ciidanka la tirakoobo markaas.
N/hure kasta oo mas’uul ah wuxuu ku dhaqaaqay inuu ciidankiisa ogaadu haduu wax ka maqan yahay waxaa la tabay naftii hure ay xabadu qarsatay oo ma dhiman markaas laakiin waxba lama noola oo caloosha aya banaanka taala markii la ogaaday inuu naftii hurahaasu maqan yahay laakiin aan lacadayn karin xaalkiisa.
Waxaan aasnay N/hure Qorax illaahay hawnaxariisto ciidankiina waa ladiyaariyay waxaana loosheegay in la helay xog badan oo kusaabsan cadowga dhankastana laynaga fadhiyo N/hurana maqan yahay.
Intaas markay dhacday waxaa la yidhi dhaawaca hala bixiyo ciidankuna hajoogo waxaa dhaawicii bixiyay ciidan kooxna ka yar unugna kabadan oo ay hormuud ama hogaan u yihiin N/hure Faseex Cataab iyo N/hure Boore oo labaduba deegaanka aad u yaqaanay.
labadaba illaahay naxariitii jano haka waraabiyo way shihiideen aniguna dabcan kamaba hadhi karo oo waxaan ahay dhakhtar iskuma sheegi karo laakiin qofka inuu dhayo uuna kabo markaas awoodi karay uun si xogtanada loo ogaado iyo kolba waxaan ku suganahay waxaa lanagudaray Raadaladii qayta mid kamida.
Hadaba waan kusoo noqon doonaa anagu waxaan mudanay iyo xaaladayadii waxaan jeclahay inaan horta sheegno wixii waabarigii qabsaday ciidankeenii iyo N/hurihii lawaayay
Ciidankii laftigiisii maadaamoo uu badnaa waxaa looqaybiyay 2qaybood.
Qayb meeshii ku hadhay oo wiilkii sugtay intuu waago baryi iyo qayb dhankaas aanu ujeedno aaday waayo waxaan rabnaa dhulka istaraatiijiga ah inaan culayska saaro maadaamoo aan wadano dhaawaca khasaaro intaas ka badana imankaro si uuna cadowgu noogu riixin dhul aan ku haboonayn jabhadaynta iyo dhaawacatoona.
Dhulkaan ku dagaalamayno een rabno inaan nalaga saarin cadowguna dhankiisa hada fadhiyo waa laga billaabo Dixdheer ,qora.illaa hoos iyo buurihii xajjiin,samane,Qulqul,Dulmaadh, ilaa iyo Daawadiid Biyacad iyo biyomadow oo istaraajiyada dhuleed kali ah mahee mid dadeed xataa ay ku jirto iyo waliba Qaybtii-Nogob oo xoogbadan oo aan halkaas xuduud kuleenahay inay nagacan siiyaana aan ka sugayno.
Hadaba waxaan ka hadlaynaa ciidankii goobta kusoo hadhay qoladanadii dhaawaca qaaday iyo qoladii dhankaas iyo dixdheer aaday dibbaan u dhigaynaa,waagii ayaa baryay waxaa la raadiyay wiilkii waxaa lootagay isaga oo caloosha xabadu kagataalo kicidna aan lahayn waa lasoo qaaday isla markiibana waxaa billaamay dagaal lafilaayay oo ah kii xalay laysugu dhaartay.
Waxaa wiilkii labaxa layidhi wiilal dhawr ah wayna labaxee ciidankiina dagaalka ayuu horay ka galay marlabaad waxaa dhashay dhaawac khasaare oo aad u badan laakiin wali wax dhimasho ah majirto laakiin nasiib daro waxaa la helay wiilashii wiilka labaxay.
Wayna shihiideen qaarkood wiilkiina waa la dhaawac tiray illaahay naxartii jano haka waraabiyo waxa wiilasha laayayna maba aha ciidankii cadowga ee gaalada ee waa dabaqoodhi markay shalay gaaladu baabaday la yidhi kaca baxa oo ciidankii u gurmada sidaasna gurmad ugu ahaa gaalada.
Ciidankii kale dhaawac badan ayaa jiray laakiin wax shihiiday majirin markaas laakiin dagaalku intaas kuma istaagin khasaaro badan ayaana dib ka dhacay waana ka hadli doonaa inaashaa allaah waxaa kale oo inoo laaban labadii qolo ee kale waxay la kulmeen.
Waxaa xusid mudan cadowga dhibka gaadhay oon qiyaas lahayn dhaawicii iyo dhimashadii waxaa lagu gurayaa Helicopter markastana waxa dagaalka soogalaya ciidan cusub aagga dagaalku kasocdaa waa aagga Goday waa ceelwayne iyo buuraha Yaballu.
waxaana qiridoona khasaaraha cadowga gaadhay saraagiishooda lafdooda iyo dabcan sida magac bixinta dagaalka ka muuqata (Quusiye)labadaba waxaanad kaga bogan doontaan dhamaadka qisada Inshaa allaah
Lasoco Qaybta 3aad inshaa allaah.